Top 4 fududaynta Siyaabaha Delete Roll Camera ka macruufka 7 Devices
> Resource > macruufka > Top 4 Siyaabaha Roll Camera faaruqa ah ka macruufka 7 Devices
Haddii qalabka macruufka 7 Oo waxaa ka buuxa videos iyo sawiro ku giringiriya Camera ah, aad u baahan tahay in ay tirtirto Roll Camera ka qalab macruufka ah in ay sii daayaan meel dheeraad ah. Halkii Roll Camera madhan ka macruufka 7 aalad gacanta, waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso ee soo socda 4 siyaabood oo ka dhigo mid aad u sahlan oo hufan ee aad shaqada u qabto. Akhri si aad u barato sida loo tirtiri Roll Camera on macruufka 7 qalabka si fudud.
Fiiro gaar ah: macruufka 7 uusan users ma bixiyaan fursad u Roll Camera madhan ka Settings> General> Isticmaalka. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad tirto faylasha in Cameral Roll qalabka macruufka 7 ah, fadlan ha halkaas tago.
Xalka 1. Roll Delete Camera ka macruufka 7 Device ah via ah Tool dhinac saddexaad (doorashada ugu fiican)
Xalka 2. saar ah macruufka 7 Device Roll Camera la Ciidamada Image (kaliya laga heli karaa Mac)
Xalka 3. faaruqa ah macruufka 7 Camera Roll Photos la kulanka xiisaha leh (oo kaliya laga heli karaa Mac)
Xalka 4. Roll Camera Delete qalabka macruufka ah 7 on Windows PC (kaliya ee PC Windows)
Xalka 1. Delete Roll Camera ka macruufka 7 Device ah via ah Tool dhinac saddexaad (doorashada ugu fiican)
Habka ugu fudud uguna wanaagsan in ay tirtirto files ka Roll Camera qalabka macruufka ah waa in aad codsato ah qalab-saddexaad. Ka dib markii la barbar qaar ka mid ah qalab laga helo internetka, halkan waxaan wali kugula talinaynaa inaad isku daydaa Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Waa fududahay in la isticmaalo Waxay. Dadka aan wax badan ka aqoon computer u isticmaali kartaa in aad tirtirto oo dhan files ee ku giringiriya Camera qalabka macruufka ah si fudud. By habka, waa qalab desktop ah. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud si meesha looga saaro wax walba oo ku giringiriya Camera qalabka macruufka ah waxa la Mac.
Hel version maxkamad free of Wondershare TunesGo in ay isku day ah!
Tallaabada 1. Soo bandhig dhan files ee ku giringiriya Camera ku macruufka 7 qalabka kombiyuutarka
Bareesada ee macruufka 7 qalab ee cable in computer USB iyo xiriiriyaan qalab macruufka la computer waxa via. Burcad Wondershare TunesGo (Mac) oo aad arki doonaa adiga iPhone waxaa soo bandhigay suuqa kala ugu weyn.
Tallaabada 2. Roll Camera faaruqa ah oo ku saabsan qalab macruufka 7
Marka hore, waa in aad ogtahay in labada videos qabashada iyo sawiro ku jira Roll Camera ah, sax? In kastoo ay ka tirsan tahay category kala duwan, Wondershare TunesGo (Mac) ku rid Roll Camera hoos Photos. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in ay doortaan files oo guji Delete.
Pro: qalab A dhamaystiran waxa uu u qalmaa in ay leeyihiin;
Con: baahan tahay inaad bixiso
Ciidamada Image la geliyo Mac ah by default. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo dhoofsadaan files ka Roll Camera, laakiin waxa ay sidoo kale la Timaadda muujinta ah ee ku giringiriya Camera madhan. Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka files delete ku giringiriya Camera ku ah macruufka 7 qalab la Ciidamada Image on Mac.
Fadlan Connect qalab macruufka 7 aad Mac via cable USB ah;
Burcad Ciidamada Image;
Daaqadda dabamariyay kor, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha ku giringiriya Camera ku saabsan qalabka macruufka halkan soo bandhigay. Dooro iyaga oo guji icon Read hoose ee suuqa kala.
Pro: Easy in ay isticmaalaan,
Con: Kaliya ka shaqeeya Mac;
Xalka 3. faaruqa ah macruufka 7 Camera ah Roll Photos la kulanka xiisaha leh (oo kaliya laga heli karaa Mac)
Haddii aad tahay qof user Mac ah, waa in aad aqoon u leh kulanka xiisaha leh ee application- on Mac. Waxay kaa caawinaysaa in aad awoodid tirtirto files ee ku giringiriya Camera qalabka macruufka 7 ah iyo sidoo kale. Eeg faahfaahinta hoose:
Isticmaal cable USB ee macruufka aad 7 qalab la yimaado in ay ku xidhmaan qalab macruufka 7 la Mac.
Burcad Kulanka Xiisaha Leh. In File menu, waxaad ka arki kartaa Import doorasho ka (magacaaga qalab macruufka ah) ah. Fadlan guji.
Held hoos u muhiim ah Command dooro dhammaan faylasha
Riix icon cas ayaa salka ku jira in ay ka saarto files ee macruufka 7 Camera qalab Roll.
Xalka 4. Delete Roll Camera on macruufka 7 aalad on Windows PC (kaliya ee PC Windows)
Xal waxa kaliya ee ka shaqeeya PC Windows. Users gaari karo si fudud iyadoo goolka habkan. Waa kuwan tallaabooyinku:
Connect qalab macruufka 7 aad Windows PC.
Aad Computer Open iyo arki doonaa arrimo aad 7 qalab. Fur folder iyo aad arki doonaa videos iyo sawiro ku giringiriya Camera waxaa lagu riday laba fayl kala duwan. Dooro files iyo xaq u gujiso. Door Delete inuu iyaga ka dhaqaajiyo ka macruufka aad 7 qalab. Halkan fadlan ha ka saarto fayl ee ku giringiriya Camera ah.
Con: Kaliya shaqeeyaa PC Windows;